FIKASANA FANAFIHANA “VILLA” : Lavon’ny balan’ny Polisy ny jiolahy iray, karohina ny namany
Ao anatin’ny fiambenana, fanaraha-maso akaiky ny vahoaka sy ny fananany ny mpitandro filaminana amin’izao fotoana mafy atrehin’ny Malagasy manerana ny Nosy izao. 31 mars 2020
Hentitra izy ireo amin’ny ady amin’ny tsy fandriam-pahalemana, ho an’ny Polisim-pirenena manokana dia mitohy mandrakariva ny fisafoana ny tanàna eto an-drenivohitra sy ny manodidina. Nahitam-bokany izany ny faran’ny herinandro lasa teo ka fantatra tamin’ny loharanom-baovao voaray fa jiolahy iray no lavon’ny balan’ny Polisy teny Ambatoroka, vaky trano iray ihany koa no voasoroka teny Andohatapenaka.
Araka ny fanazavana voaray bebe kokoa, ny alahady 29 marsa lasa teo, nisy andian-jiolahy saika hanafika “villa” iray teny Ambatoroka. Nifanehitra tampoka tamin’ny Polisin’ny “Unité Spéciale d’Intervention” anefa ireto olon-dratsy ka avy hatrany dia lavon’ny bala teo no ho eo ihany ny jiolahy iray tamin’ izy ireo. Nandritra ny fisavana azy dia nahitana basy vita gasy iray sy bala tany aminy, ny namany iray kosa dia mbola tafaporitsaka nitsoaka. Rehefa nandeha ny fanadihadiana lalina dia tsikaritry ny mpanao famotorana fa anisan’ilay jiolahy nifampitifitra tamin’ireo Polisy teny Antsahabe, vao tsy ela akory izay ity maty voatifitra ity.
Tsy mitsahatra manohy ny asa ratsiny anefa ireto farany satria dia mbola tratra nifanena tampoka tamin’ny mpitandro filaminana indray raha nikasa hanafika teny Ambatoroka. Efa nahazoana vaovao mialoha moa ireto jiolahy ireto fa nikasa hanatanteraka fanafihana teny Ambohimanambola sy Ambatoroka saingy izao rava izao. Karohina hatrany kosa ny namany iray tafatsoaka ankehitriny.
Jiolahy nikasa hamaky trano teny Andohatapenaka voasoroky ny Polisy
Rehefa tonga ara-potoana teny Andohatapenaka ny Polisy ao anatin’ny Boriborintany fahafito raha toa ka nandre fa misy jiolahy nikononkonona vaky trano teny amin’ny manodidina, omaly alatsinainy lasa teo ihany. Voasoroka ny teti-dratsy rehefa nahavoaray antso haingana ireto mpitandro filaminana ka namonjy ny mponina teny amin’ny manodidina avy hatrany, tsy niandry fotoana ela. Tsy nisy araka izany ny zavatra very fa ny vavahadin’ ilay trano saika horobaina no efa tafavohan’ireo jiolahy.
Manamafy hatrany moa ny tompon’andraikitra eo anivon’ny Minisiteran’ny filaminam-bahoaka fa mivoha 24/24 sy 7/7 avokoa ny sampan-draharaha rehetra ao amin’izy ireo ahafahana manampy ny olom-pirenena. Entanina mandrakariva ny rehetra mba hampandre azy ireo raha sendra ka mahita trangam-piarahamonina mampiahiahy, indrindra amin’izao vanim-potoana somary mangina izao ny tanàna. Betsaka mantsy ireo jiolahy no minia mahasahy manohy ny asa ratsy .